Igadi yaseStargazy - I-Airbnb
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguLee
Ikhabhathi eyothusayo yelog kwigadi entle yabucala kwindawo yokuhlala yesintu, enezindlu ezakhiwe ngo-1880s’.
Igayidi yangaphambili nasemva kweegadi zabucala zijikeleze ikhabhathi. Ikhabhinethi ifikeleleka ngendlu enkulu kusetyenziswa isitshixo se-keysafe ngomnyango wangaphambili, nge-conservatory kunye nokunyuka kwamanyathelo ukuya kwi-cabin. Kukho indawo yokupaka ezitratweni esetyenziswa ziindwendwe ngaphambi kwendlu. Kulala iindwendwe ezimbini ezinebhedi enye enegumbi lokuhlambela elixhotyisiweyo, isokethi yeshaver, isofa (isofa), itafile yokutyela kunye nezitulo, ikhitshi elibandakanya iketile, itoaster, imicrowave, ifriji/ifriji, iTV, ekhuselekileyo, i-ironing board, iron, hair dryer. Wi-fi, isithethi seBluetooth. Iitawuli kunye nelinen yokulala zinikezelwe. Isidlo sakusasa sase-Continental sibandakanyiwe. Imithetho yeNdlu - Akukho ukutshaya kwi-cabin okanye kwindlu enkulu. Kwakhona sicela iindwendwe zethu ukuba zihloniphe izindlu ezingabamelwane kwaye zigcine umgangatho wengxolo ukuya kwinqanaba elamkelekileyo emva kwe-10pm, ngaphandle kokuba phumla kwaye ujabulele ukuhlala kwakho.
Indlu imi kumgama wokuhamba weemayile ezintathu zesanti yegolide kwindawo emangalisayo yaseSt Ives Bay kunye nendlu yesibane edumileyo yaseGodrevy kunye nolwandle lokusefa. Indlela yebhasi ekufutshane ukufikelela eSt Ives, ePenzance kunye nezinye iindawo ezinomdla zalapha. Iivenkile phakathi komgama wokuhamba o.k. Marks & Spencer, Next, Boots, Lidls and Asda. IHayle ikwaqhayisa ngeendawo zokutyela ezininzi ezithandekayo kunye noluhlu lokuphuma kwalapha ekhaya, konke kumgama wokuhamba.
Umamkeli zindwendwe uSharon, uLee kunye nentombi uChloe bahlala apha iminyaka elishumi elinesibini, kunye nezinja zabo ezimbini ezinobuhlobo kakhulu, uMax (collie cross), uTeddy (golden retriever) kunye noMartha the tabby cat. Uthando lwabo lokulima luya kubonakala ngokucacileyo kwisakhiwo segadi yabo ekhethekileyo, ezolileyo kunye neyodwa. Bobabini bebekwishishini lokwamkela iindwendwe kule minyaka ingama-30 idlulileyo kwaye omnye wabo uhlala efumaneka ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo onokuba unayo.
Umamkeli zindwendwe uSharon, uLee kunye nentombi uChloe bahlala apha iminyaka elishumi elinesibini, kunye nezinja zabo ezimbini ezinobuhlobo kakhulu, uMax (collie cross), uTeddy (g…